AutoCAD 2016. End of liisanka weligeed ah.
Maaddaama ay tahay isbeddel dabiici ah oo isbeddelkan caalamiga ah, isku xira, iyo ku dhowaad aan la saadaalin karin, softiweerku hadda ma aha badeecad sanduuq ku jirta oo wuxuu noqonayaa adeeg. AutoDesk maahan mid ka reeban oo aan horeyba ugu aragnay Adobe, Bentley Systems, Corel, si aan uxusho inbadan. AutoDesk ayaa ku dhawaaqday in sanadkan 2015 uu noqon doono kii ugu dambeeyay ...
Dhawaan Juan Manuel Anguita wuxuu isiiyay nooca cusub ee codsigan oo aan horey usii dallacnay, laakiin waqtigaas wuxuu la tagay dhibaatooyin qaar ka mid ah nooca cusub ee Excel. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, laakiin aad u shaqeynaya. Waa inaad gashaa tiro ka mid ah barta, iskuduwaha x, y, z; Waxaan dhigay ...
Beddesho ED50 file DGN in ETRS89 a
Isticmaalayaasha GIS badanaa waxaa lagu xujeeyaa inay beddelaan xogta CAD iyo nidaamyada tixraaca. Waxaan dhihi karnaa caqabad maxaa yeelay, xaalado badan, isbadalkan wuxuu ku lug leeyahay shaqo taxaddar leh oo ugu dambeyn noo oggolaaneysa inaan ku ilaalino macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah xogta asalka ah. Waa wax cajiib ah in shaqadani ay la socoto Microstation, laakiin dhab ahaantii kuwa ...
AutoCAD 3D Dabcan albaabka, waayo, $ 34.99
Waa Koorsada Hanuuninta Degdega ah, oo hadda laga iibsan karo lagana heli karo albaabka guriga qiimo dhan US $ 34.99. Wax soo saarka waxaa ka mid ah: Koorsada oo dhammaystiran oo ah AutoCAD 2D iyo 3D oo leh 477 fiidiyeyaal ah Fududeyn fudud oo loogu talagalay la-tashiga mowduucyada Dhammaan tusaalaha koorsada waxay faylaalayaan 17,000 sawir sawir ah ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Maanta waxaa jira dhowr koorsooyin AutoCAD oo bilaash ah oo internetka ah, tan tanna uguma talagalin inaan ku celcelinno dadaalka ay horey u sameeyeen kuwa kale, laakiin halkii lagaabi lahaa wax ku biirinta soo bandhigaysa caqabadda udhaxeysa koorsada sharraxaysa dhammaan amarrada iyo xaqiiqda adeegsadaha mar ogaa amarradu ma yaqaaniin halka laga bilaabayo ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Video
Microstation-ka baloogyada waxaa lagu magacaabaa Unugyo (unugyo) in kastoo xaaladaha qaarkood aan maqlay in sidoo kale loogu yeero unugyo. Maqaalkani waxaan ku arki doonaa sida loo sameeyo iyo caqliga ka dhigaya inay ka duwan yihiin astaamaha AutoCAD. 1. Waa maxay unugyada loo adeegsado? Si ka duwan GIS-ka, halkaas oo astaantu ka firfircoon tahay ...